Imibuzo evame ukubuzwa - iTangshan Jidong Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd.
Izinsuku zokulethwa ziyahlukahluka ngokuya ngomkhiqizo, Ngokuvamile phakathi kwesitoko nezinsuku eziyi-180. Izikhathi zokuhola ziqala ukusebenza lapho (1) sesitholile idiphozi yakho, futhi (2) sinemvume yakho yokugcina yemikhiqizo yakho. Uma izikhathi zethu zokuhola zingasebenzi nomnqamulajuqu wakho, sicela udlule izidingo zakho ngokuthengisa kwakho. Kuzo zonke izimo sizozama ukwamukela izidingo zakho. Ezimweni eziningi siyakwazi ukwenza njalo.
Imibandela yokukhokha kuzoxoxiswana ngayo ngokuya ngemikhiqizo ehlukile kanye nenani lesivumelwano.